केरा खाने कतिवेला ? खाने कतिवटा ? | Nepali Health
केरा खाने कतिवेला ? खाने कतिवटा ?
२०७४ वैशाख ४ गते ९:१२ मा प्रकाशित
केरामा हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक पौष्टिक तत्व पाइन्छन् । केरामा पाइने भिटामिन सी, भिटामिन बी सिक्स, म्यागनिज, पोटासियम, फाइबर र बायोटिनजस्ता तत्व शरीरका लागि जरुरी पोषक हुन् । यस्ता तत्वले शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी प्रदान गर्दै तौल बढाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
त्यसैले तौल घटाउने चक्करमा रहेकाले केरा खान सकेसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाब दिने गरेका छन् । आवश्यकताभन्दा बढी केरा खाएमा त्यसमा पाइने क्यालोरीले तौल बढाउने उनीहरूको सुझाब छ :
दिनमा कति खाने ?
केरामा क्यालोरीको मात्रा बढी हुन्छ । सुगर र फाइबरको मात्रा पनि पाइन्छ केरामा । फाइबरले पाचनक्रिया सुस्त गरिदिन सक्छ । केरामा पाइने पोषक तत्वले शरीरमा लामो समयसम्म ऊर्जा दिइरहन्छ । दिनमा दुईवटाभन्दा धेरै केरा खानु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उचित नहुने विज्ञहरूको सुझाब छ । केरा खाँदा क्यालोरी अत्यधिक बढ्न सक्ने हुनाले लिमिटमा खानुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ । एउटा ठूलो आकारको केरामा लगभग १२० क्लालोरी हुन्छ ।
कुन समय खाने ?
शरीरको ऊर्जा खर्च हुने समय पारेर केरा खानु उत्तम हुन्छ । केरा खाएपछि हार्डवर्क गरिएन भने फाइबर पचाउन गाह्रो पर्छ । एक्सरसाइज गर्नुभन्दा १०–१५ मिनेटअघि या पछि केरा खानु सबैभन्दा उत्तम समय हो । हार्डवर्कका वेला केरामा हुने कार्बोहाइड्रेट्सले शरीरलाई लामो समयसम्म ऊर्जा दिन्छ ।
केराले तौल बढाउँछ ?
क्यालोरी बढ्नेगरी केरा खाइएन भने तौल पनि बढ्दैन । आवश्यकताभन्दा धेरै क्यालोरी बढ्नेगरी खाँदा तौल स्वतः बढ्न जान्छ । स्वास्थ्यका लागि आवश्यक जुनसुकै स्वस्थ आहार पनि मात्राभन्दा बढी खाए तौल बढ्नु स्वभाविक नै हो । यतिमात्रै फरक हो, केराले तौल छिटो बढाउँछ ।
सर्पदंश उपचार केन्द्रका लागि ६० लाख सहयोग
विश्वकै सबैभन्दा बृद्ध भनिएकी ११७ बर्षीया महिलाको निधन